Amaxwebhu kaGoogle: asebenza njani amaxwebhu kaGoogle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukusebenza namaxwebhu efini ayisiyonto iphambeneyo namhlanje, ngokuchaseneyo. Kwaye phakathi kwezinto ezininzi esinokukhetha kuzo, yile Amaxwebhu kaGoogle yenye yezona zisetyenziswa kakhulu. Ngaba uyazi ngamaxwebhu kaGoogle?
Ukuba awuyazi ukuba yintoni, okanye awukayisebenzisi ngamandla ayo aphezulu, siya kukunceda ukuba uyenze kwaye ufumane esinye sezixhobo oza kuzisebenzisa, ngakumbi ukuba ungomnye wabo bahamba kakhulu okanye utshintshe iikhompyuter kwaye ihlala igcwele iipendrives, ii-dvd's, ii-cd kunye neediski zangaphandle.
1 Yintoni amaxwebhu kaGoogle, amaxwebhu kaGoogle
2 Kutheni amaxwebhu kaGoogle endisebenzela?
3 Usebenzisa njani amaXwebhu kaGoogle
4 Kwaye ungangenisa amaxwebhu okanye wenze kuphela ezo zenziwe apho?
5 Ungabelana kanjani ngoxwebhu noGoogle Amaxwebhu
Yintoni amaxwebhu kaGoogle, amaxwebhu kaGoogle
Amaxwebhu kaGoogle, ekwabizwa ngokuba ngamaGoogle amaXwebhu ngenene liqonga lomnqamlezo; Isixhobo abakunika sona kuGoogle kwaye sinokusetyenziswa kwikhompyuter yakho, ithebhulethi, i-smartphone yakho ... Yenzelwe ukuba kungabikho mfuneko yokuba uphathe amaxwebhu amaninzi xa uqhuba iipeni, ukuqhuba kwangaphandle kunye nezinye , kodwa kunokuba uhlale efini. Kodwa inokukhutshelwa ngokulula.
Esi sixhobo sihambelana ngokupheleleyo neentlobo ezahlukeneyo zeefayile, nokuba ngamaxwebhu okubhaliweyo, izilayidi, izipredishithi ... Ngapha koko, iinkqubo oza kuzisebenzisa zii "clones" zeOfisi Suite Kwaye okona kubaluleke kakhulu, bakhululekile. Ke, uya kuba ne-Excel, iLizwi, iPowerPoint kwinguqulelo yasimahla (kwaye uya kuba nakho ukuvula ngezi nkqubo amaxwebhu owenzileyo kunye nabanye (kunye nezinye iifomathi ezininzi).
Kutheni amaxwebhu kaGoogle endisebenzela?
Khawufane ucinge ukuba kuya kufuneka uthathe uhambo lweshishini. Kungenzeka ukuba uthathe onke amaxwebhu owafunayo, kodwa uza kuthini xa ulibale elinye kwaye ungenamntu wokukuthumela lona? Uya kwandula ke ube sengxakini. Kwelinye icala, ukuba namaxwebhu efini uyazi ukuba, nokuba kukwi mobile, ithebhulethi okanye ikhompyuter yakho, uya kuba nakho ukufikelela kuzo, ukuzikhuphela, ukuziprinta, njl. ngaphandle kwengxaki.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nayo Amaxwebhu kaGoogle anenzuzo ongenakuyifumana nabanye: leyo abantu abaninzi ngexesha elinye banokwenza utshintsho ngexesha lokwenyani, ngendlela yokuba ibe sisixhobo esifanelekileyo kumaqela okanye amaqela omsebenzi.
Kule nto kufuneka songeze ukuba inezimvo zombini (ukongeza kunye nokuzifunda) kunye nengxoxo, ukuthetha naloo mntu ngaphandle kokuxhomekeka kwifowuni okanye kwenye incoko ngaphandle kwesi sixhobo (ke yonke into igxile kwindawo enye).
Kwenzeka into efanayo ngokuhlela, apho uya kuba nokukhetha ukuhlela, kodwa ukwacebisa, ukulingisa umsebenzi wolawulo lotshintsho kwiLizwi, ngendlela oza kuthi ulubone utshintsho kunye nenketho yokuvuma okanye ukucima, ngaphambi yinxalenye yolu xwebhu lokugqibela.
Kwaye ukuba ucinga ukuba ukusebenzisa amaxwebhu eGoogle kuya kuba nzima ngakumbi kuba kuya kufuneka uxhomekeke kwi-Intanethi, yazi ukuba akunjalo. Ingasetyenziswa nangaphandle kwe-Intanethi kuba kuya kufuneka ukongeza kuphela ulwandiso kwiChannel kuGoogle amaXwebhu ngaphandle kweintanethi kunye nokwenza ukhetho olungasasebenziyo kuGoogle Amaxwebhu, kuseto. Ke awuyidingi i-Intanethi, kwaye iya kuba mva xa zonke zilayishwa ngaphandle kokuba uzikhathaze nganto.
Usebenzisa njani amaXwebhu kaGoogle
Ukuba emva kwezo uzibonileyo, unomdla kuGoogle amaXwebhu, kuya kufuneka uyazi ukuba into oyifunayo kukuba neakhawunti kaGoogle ukuze usebenzise esi sixhobo. Nje ukuba ungene kwi-imeyile yakho, okanye kwiphepha lasekhaya likaGoogle, liya kukunika ithuba lokungena. Ukuba uyakwenza oko, uya kubona ukuba iya kubeka ilogo kunye nefoto ye-gmail yakho.
Okulandelayo, kuya kufuneka ubethe isikwere samanqaku alithoba onawo ngaphezulu kwesikrini. Kulapho ke Uya kufumana izicelo ezininzi zikaGoogle, kwaye aya kuba phi amaXwebhu kaGoogle. Kufuneka ucofe nje ku "Amaxwebhu" kwaye kunjalo.
Lumka, ukuba awuyifumani, cofa kwindawo ethi "Okungakumbi kuGoogle" kwaye zonke izixhobo ziya kudweliswa, nangona kuyinto eqhelekileyo ukuba ibonakale phakathi kwezokuqala kuba isetyenziswa kakhulu.
Nje ukuba ungene, uya kuba nomqolo wokuqala apho uxwebhu olutsha luya kuvela khona. Apho baya kukunika iitemplate ezinje ngokuQala kwakhona, iileta, izindululo zeprojekthi, iincwadana ezinemifanekiso, iingxelo ... Kodwa nokubanakho ukudala uxwebhu olungenanto.
Ukuba ujonga igalari yeTemplate, xa ucofa kuyo, uya kungena kwimenyu ethile yeetemplate ezikhoyo, ukuba kunokwenzeka uzifune.
Ukuba unika imivalo ethe tye (kwikona ephezulu ngasekhohlo, phambi kwelogo kunye negama lamaXwebhu), uyakubona ukuba iintlobo zamaxwebhu onokuzivula zahlukile: Amaxwebhu (igama, isicatshulwa), ispredishithi, imiboniso kunye neefom.
Kwaye ungangenisa amaxwebhu okanye wenze kuphela ezo zenziwe apho?
Ukuba sele uwenzile amaxwebhu kwaye uyawafuna kwesi sixhobo, yazi ukuba awuyi kuba nangxaki xa uwenza. Kufuneka ubangenise ngaphandle. Njani? Sichaza amanyathelo:
Jonga kwiscreen sakho. Khangela uphawu oluthi "dibanisa" kwikona esezantsi ekunene. Kungenzeka ukuba, kwiscreen, ayizukuvela, ke iqhinga kukushenxisa imouse phezulu nasezantsi nevili ukuze isikrini sitshintshe emva koko sivele. Xa ucinezela, iyakuvumela ukuba ulayishe uxwebhu olufunayo kwikhompyuter yakho, ipendrive, idiski yangaphandle ... kwaye kwimizuzu nje embalwa uya kuba nakho ukusebenza nayo.
Kwaye ukuba ukhathazekile malunga nefomathi, kwiimeko ezininzi awuyi kuba nangxaki, iya kuhlala ifana naleyo uyenzileyo ngaphandle kwesixhobo; ekuphela kwento enokutshintsha yifonti, kodwa ifomathi ngokwayo kufuneka igcinwe.
Ungabelana kanjani ngoxwebhu noGoogle Amaxwebhu
Ngaphambi kokuba sichaze ukuba enye yeefayile ze- Izinto eziluncedo kuGoogle AmaXwebhu kukukwazi ukusebenzisana phakathi kweli xwebhu. Kodwa, ukwenza njalo, okokuqala kubalulekile ukuyaba. Ewe ilula nje ngokufana neminye imisebenzi.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ucofe kwiqhosha lasekunene (kunye nemouse ebekwe kuxwebhu lukaGoogle) kwaye ucofe ekwabelaneni. Uya kufumana iscreen esincinci esithi "Yabelana nabanye." Nazi iindlela ezimbini onokukhetha kuzo:
Fumana ikhonkco lokwabelana ngoxwebhu.
Yongeza abantu ukuba bayenze. Ukwenza oku, kungcono ukusebenzisa ii-imeyile (kodwa gcina engqondweni ukuba kufuneka bevela kuGoogle).
Kwimeko yokongeza abantu, ikuvumela ukuba ubanike ukufikelela ekuhleleni, ekunikeni izimvo okanye ekuboneni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Amaxwebhu kaGoogle: asebenza njani amaxwebhu kaGoogle